TRINITERA: Nahoana no Trinitera no anarantsika?
Nahoana no Trinitera no anarantsika?
"Tout est grâce", hoy Mb Thérèse de l'Enfant Jésus. « Ny zavatra rehetra dia entin'Andriamantira hahasoa izay tiany» hoy koa i Paoly (Rom 8,28). Dia izay tokoa angaha no hanombohako ity fifampizarana kely ity izay niainga tamin'ny zava-niseho na hoe zavatra nolalovana teo amin'ny fiainana andavan'andro.
Nahalasa ny fisainako tokoa mantsy ary nanosika ahy handinika ny adihevitra nifanaovan'ny rahalahy zoky iray sy ny tanora novisy tato antrano nandritra izao telo andro anomanana ny fetin'ny Trinité Masina Titulairen'ny Fikambanana izao. Tsy haiko moa hoe inona no dikan'io teny « Titulaire » io amin'ny teny malagasy ka dia aleoko najanona toy izao ihany satria azontsika rahateo ny tiany hambara. Tsara mantsy ny manitsy tsindrimpeo amin'io fa ny Trinité Masina dia Titulaire (izany hoe Tompony angaha) fa tsy Patronne n'ny Ordre akory. N.D du Bon Remède no Patronne principale (08 Octobre) ary i Sainte Agnès no patronne faharoa (28 janvier, andro nankalazan'i Jean de Matha ny Lamesa voalohany nahazoany ny inspiration'ny fanorenana ny Fikambanana.)
Ny votoatin'ny adihevitra nifanaovan'izy ireo moa dia tahatahaka izao. Hoy ity zokilahy ity taminay rehetra teo ampihinanan-kanina tsara izahay tamin'izay : « mba namaky ny règle aho dia tsy nahita an'i Jean de Matha nilaza tao mihintsy aho hoe antsoina hoe Ordre de la Sainte Trinité ny Fikambanantsika. » Marihiko fa nanomana famelabelarana momba ny misterin'ny Trinité Masina ity rahalahintsika ity fa nangatahin'ireo anabavintsika hanao izany ao amin'ny paroasy iasan'izy ireo mantsy izy. Teo ampanomanana angamba ity zokilahy ity vao nieritreritra hoe ahoana tokoa moa no havaliko ny olona raha manontany ny fifandraisan'ity Misitery ity amin'ny Fikambanantsika ny olona. Mino aho fa izay no nahatonga azy voatery mba namaky ny Règle sy ny Constitutions (enga anie ka mba tsy ho fahotako izany raha fitsaratsarana fahatany.) Nanizingizina hatrany moa izy amin'izany hoe tokony nomena anarana hafa ny Fikambanana fa tsy hoe Ordre de la Sainte Trinité. Ohatra hoy izy ny hoe « frères aux ânes » zao mety tsara. Tsotra moa ny valin-teniko hoe ka izany no ianarana mandritra ny noviciat, ary izaho manokana dia nijanona ho mpikambana ato hatramin'izao satria antsoina hoe « Ordre de la Sainte Trinité » izy fa raha anarana hafa no nentiny dia mety tsy ho mpikambana ato mihitsy aho fa mety tany ankafa… dia maro moa ny fanazavana niezahako nomena tamin'izay indrindra indrindra mba hanampy ny tanora tsy hilatsaka ao anatin'izany fomba fijery mampalahelo izany koa izy ireo.
Toa Fahasoavan'Andriamanitra anefa no nisehoan'izany rehetra izany araka ny voalazako teny ampiandohana satria nanampy ahy nandinika izany hoe mba firy tokoa moa isika Trinitera no tena niditra ho Trinitera ka nahalala tsara ny antony nidirany, na ny metimety kokoa angaha dia ny hoe firy isika no, rehefa nahalala bebe kokoa ny Fikambanana rehefa tafiditra tao no nanampan-kevitra hijanona satria nahalala tsara ary vonona hitia ary mirehareha amin'ny maha Trinitera azy ?
Hararaotiko moa izany ity fifampizaraha ity mba hanomezako anao eto ny valinteniko tamin'izay mikasika ity Trinité Masina Titulairen'ny Fikambanantsika ity sao mba hanampy anao izany na mety hanome finivana anao mba hanao fikarohana sy fandalinana manokana momba ny identité-ntsika.
Voalohany indrindra aloha dia aoka tsy hotadiavina any amin'ny tsy hitadiavana azy ny zavatra. Raha hijery hoe aiza i Jean de Matha no niteny hoe ny Ordre dia mitondra ny anaran'ny Trinité Masina dia tsy ao amin'ny règle no ho ijerena izany fa ny règle dia ny lalàna tokony hiainana fa tsy ny anaran'ny Fikambanana na ny « Titre » entiny no lazaina ao.
I Jean de Matha raha soratra no tenenina dia namela zavatra roa monja hoantsika izy :
1. Ny Mosaïque izay antsointsika amin'ny fomba mahazatra hoe le sceau de l'Ordre.
2. Ny règle izay manana numéro 40 monja.
Ny momba ny Titulairen'ny Fikambanana dia ilay Mosaïque no manampy antsika hahazo izany. Ankoatran'ny sarin'i Jesoa Mpanavotra sy ny babo roa (izay tsy hovitako eto moa ny interpretation fa lava be, angamba article hafa no hiezahako hamelabelatra izany) dia misy soratra manodidina ilay sary ka io no mamaly ilay fanontaniana. "Signum Ordinis Sanctae Tinitatis et Captivorum." Amin'ny alalan'io soratra sy sary io dia izay rehetra mandalo eo San Tomaso in Formis na izay mahita io sceau io hatraiza hatraiza dia mahazo avy hatrany fa i Jean de Matha tsy nanorina ny Fikambanana fahatany akory fa noho io fahitana io no namoronany azy (inspiration divine) ary tsy anaranarana fahatany akory no nomeny ny Fikambanana fa ny Trinité Masina no nanankinany ny Fianakaviana hahoriny sy ny asa fanirahana hosahaniny.
Maninona no ny Trinité Masina no nofidiny ho Titulairen'ny Ordre?
Ny olona tsara toerana hamaly io fanontaniana io dia i Jean de Matha ihany fa izy no nahazo ny inspiration mivantana….Isika kosa anefa miainga amin'ny zavatra navelany hoantsika sy ny atao hoe "contexte" dia afaka maminavina ihany izay mety ho nanosika azy hanao ity safidy ity.
Fantantsika fa teraka tamin'ny taonjato faha 12 ny Fikambanana. Araka ny filazan'ny mpahay tantara dia fotoana nanombohan'ny "devotion" amin'ny Trinité Masina tamin'izay, fa indrindra tao amin'ny faritra nitomboan'i Jean de Matha. Inoana ary fa ni-influencé ny devotion manokana nanany koa izany zava-misy izany. Io vanimpotoana io koa dia haintsika fa fotoana nampamaivaivay ny fampijaliana ireo kristianina nandeha hanafaka ny tany masina 'ilay atao hoe croisade' ka lasa babon'ny silamo tany noho ny finoany sy ny finiavany hanavotra ny tany niriariavan'ilay Mpamonjy an'izao tontolo izao. Ireo silamo izay mpampijaly sy nanery ny olona handao ny finoany tamin'izany moa dia mino Andriamanitra tokoana ihany koa izay fantatsika amin'ny fomba fiantsoany Azy hoe Allah (asa moa raha io no fanoratra azy na tsia) ary ny teny hoe Trinité Masina hoazy ireo dia midika fa tsy tokana intsony izany Andriamanitra inoantsika fa telo. Izy ireo rahateo moa manizingizina mandraka ankehitriny fa i Jesoa dia tsy Andriamanitra izany fa Mpaminany ihany ary diso hevitra isika kristianina mino Azy ho Andriamanitra.
Inoantsika koa ary izany fa mety ho anisan'ny nahatonga ny mpanorina ny Fikambanana hanao ny safidy izany zava-misy izany. Tiany hambara amin'ny fiainanany sy ny ataony fa manavotra ny babo maimaim-poana izy (tsy tokony hohadino fa efa nisy ny mpanovatra ny babo tamin'izay fotoana izay saingy tsy maimaimpoana fa mandoa vola ny fianakavian'izay havotana, lasa fitadiavam-boha hoan'ny olona sasany izany ny zava-misy) na dia hamoizany ny aina aza satria mino an'Andriamanitra Trinité Masina izy…Tonga tany Afrika avaratra izy, hanavotra ny babo noho ny finoany fa Andriamanitra dia Trinité Masina, ary ho voninahitr'izany Trinité Masina izany no anavotany ireto rahalahiny mijaly. Ny fanehoampitiavana toy izany rahateo moa no fitoriana lavorary ny Fitiavana mampiombona ny Trinité Masina. Azo heverina izany fa témoignage, fijoroana ho vavolombelon'ny finoany ny Trinité Masina no nahatonga ny mpanorina hisafidy ny Trinié Masina ho Titulairen'ny Fikambanana. Ny fanomezam-boninahitra ny Trinité Masina no nataony vaindohandraharahany ka mba hiharihary izany fanomezamboninahitra izay dia narahiny asa izay ny Trinité Masina ihany no nanome izany asa na iraka izany dia ny Fanafahana ny babo. Isika Trinitera ankehitriny koa dia voaantso hiaina izany fijoroana ho vavolombelona izany. Ny maha trinitera antsika fotsiny dia efa fitoriana ny maha Trinité Masina an'Andriamanaitra (le fait d'être trinitaire c'est déjà une évangélisation et une façon de libérer les captifs). Izany hoe ny fanolorana ny tena ho Trinitera fotsiny, na dia mbola tsy miteny ny asa hatao aza dia efa fitoriana ny misiterin'ny Trinité Masina. Relijiozy antita iray ohatra na marary tsy miasa intsony, ka nefa noho izy trinitera dia efa fitoriana izany (nahafoy ny ainy manontolo noho ny finoany fa Trinité Masina Fitiavana Andriamanitra izy ka tsy hoe rehefa tsy afaka miasa intsony dia tsy trinitera intsony). Zava-dehibe ny mahatsapa izany mba tsy ho revo ao amin'ny atao hoe activisme, tsy hoe miasa isika akory vao trinitera….fa trinitera miasa. Tsy hoe miasa isika mba ho trinitera, fa noho isika trinitera dia misy asa tokony na azontsika atao… Na dia ny akanjontsika fotsiny aza anie, haintsika tsara izany, ireo loko telo dia efa mampahatsiahy ny Olona Telo ao amin'ny Tinité Masina. Ny trinitera dia izay mitory amin'ny teniny, ny asany ary ny fiainany manontolo fa Trinité Masina Fitiavana Andriamanitra. Araha ny hevitro, ny fanavotana ny babo dia tsy inona akory fa fampisehoana mivaingana ny fiderana tsy tapaka an'Izy Trinité Masina amin'ny alalan'ny asa ihany…mitia ny madinika izy endrika isehoan'Andriamanitra, fa indrindra ireo mijaly sy enjehina noho ny finoana ary ireo izay mila ho very finoana noho ny mafy iaretany…Tsy misy afaka hilaza fa tia an'Andriamanitra ka nefa hanao tsinontsinona ny madinika. Ny Trinité Masina tsy misaraka amin'ny mijaly, fa indrindra ireo mijaly noho ny finoana azy, hany ka na izy ireo koa aza dia manjary tompon'ny Fikambanana miaraka amin'Izy Trinité Masina; 'Ordre de la Sainte Trinité et des captifs'. I Jean de Matha no nanoratra izany fa tsy olon-kafa akory. Araka ny filazan'ny mpahay tantara mantsy dia "vers 1210" no nampanaovany io Mosaïque io, nefa izy dia haintsika fa le 17 Décembre 1213 no maty…
Raha ny règle indray no asian-teny kely dia intelo ihany (ankoatran'ny fampidirana hoe 'Au nom de la Sainte et Indivisible Trinité') no voateny mazava ao ny teny hoe Trinité Masina ( n° 1, n°3, n°4).
Ny n°1 sy 3 dia miteny ny Maison de la Sainte Trinité. Maison de la Sainte Trinité fa tsy hoe Maison Sainte Trinité. Zava-dehibe ny mi-préciser an'io satria raha « maison Sainte Trinité » dia toy ny hoe « Titre » fotsiny na hoe « dédiée à la Trinité » ny trano, fa raha « maison de la Sainte Trinité » kosa dia ny Trinité Masina mihintsy izany no tompon'ny trano ary anisan'ny mponina ao amin'io trano io.(Mino aho fa ankoatran'ny fanetren-tena tiany hananan'ny lehiben'ny trano dia anisan'ny tsy itiavan'i Jean de Matha ny teny hoe supérieur io précision io satria manjary ho supérieur'ny Trinité Masina izany izy raha antsoina hoe supérieur fa raha ministre kosa dia mety tsara satria mpanompon'ny mpiray trano rehetra, ao anatin'izany ny Trinité Masina.) Ny n°3 kosa dia milaza ny Eglizy izay tokony hitondra ny anaran'ny Trinité Masina.
Miseho amin'ny endrika hafa koa anefa ny Trinité Masina ao amin'ny règle : miseho Izy indraindray amin'ny alalan'ny teny nampiasin'i Jean de Matha. Ohatra amin'izany ny fampisany ny teny hoe« tiers pars », izany hoe ny fanana zaraina Telo (n°2), ny fampiasany ny isa 3 hilazana ny isan'ny mpiray trano (n°3). Eto ohatra dia azony natao ny niteny tsotra hoe ny frera ao amin'ny trano iray dia 7, (fito) toy ny règle de 1633 éditée par Urbain VIII n°4 izay milaza tsotra hoe « Dans une même maison, les frères doivent être au moins douze… », ka nefa i Jean de Matha dia nisafidy hitanisa in-telo ny isa telo (3) izay mandefa ny saina avy hatrany any amin'ny misiterin'ny Olona Telo ao amin'ny Trinité Masina izany. Anisan'ireo endrika isehoany ihany koa ny fetin'ny Trinité Masina izay ankalazana ny chapitre général (Octave de la Pentecôte, n° 24.) Tokony tsy ho hadino fa tamin'izany fotoana izany tsy mbola officielle toy ny ankehitriny ny sollenité de la Sainte Trinité ka nefa dia efa mazava ny lalàna nomen'ny mpanorina antsika fa io Alahady manaraka ny Pantekoty io no fetin'ny Trinité Masina ankalazantsika ny Titulairen'ny Fikambanantsika.
Azo heverina ho anisan'ny nanosika azy hisafidy ny Trinité Masina ihany koa ny fitiavany ny Fanetren-tena. Tsara ny manamarika fa tamin'izany fotoana izany dia matetika nitondra ny anaran'ny toerana niforonany na ny anaran'ny mpanorina ny fikambanana ny fianakaviana nahoriny : ohatra amin'izany ny bénédictins sy ny augustiniens. Tsy izany kosa anefa no safidin'i Jean de Matha fa Ilay nanome azy ny iraka ihany no nomeny ho tompon'ny Fianakaviany. Mino ihany koa anefa aho fa anisan'ny nitiavany ny Trinité Masina dia satria izy tena olon'ny firahalahiana ka tiany hanjaka ao amin'ny trano naoriny ny Fitiana mampiray ny Trinité Masina. Raha jerena dia 40 monja ny numeron'ny règle navelany ka nefa ny teny hoe « frères » miverina tsy latsaky ny in- 29. Tsy misy antsoina hoe Père izany fa frère daholo mba tsy hisy ny fanavakavahana amin'ny « frères laïcs » sy ny « frères clerc » : mitovy ny fiantsoana ny rehetra, ny isan'ny akanjo ananana, ny trano fatoriana, ny sakafo sy ny sisa rehetra (ny teny hoe père mahazatra antsika ankehitriny dia efa taty aoriana be vao lasa fahazarana ary ny franciscains izay « humbles » dia miaiky fa nandova an'io espritn'i Jean de Matha io ny fondateurn'izy ireo amin'ny fifampiantsoana hoe frères ary ny indrisy dia izy ireo indray no mampiasa izany bebe kokoa noho isika ankehitriny).
Anisan'ny nahatonga ny mpanorina ny fikambanantsika tsy hisafidy ny « grande communauté » izany fitiavany ny firahalahiana izany ka aleony natao izay tena hahavitsy ny mpiray trano mba hisy ny tena fifandraisana akaiky. Tsy tokony hohadino fa tamin'izany dia ny couvent na ny monastère no fiantsoana ny maison religieuse fa tsy hoe maison, ary ny communauté iray dia mety hahitana hatramin'ny mpikambana an-jatony mahery, ka nefa i Jean de Matha dia « maison » no nampiasainy hampiavahana izay fahakelezan'ny isa izay (7 monja) sy ny fahantrana tokony hiainan'ny tsirairay ihany koa moa rahateo. Maro moa ny zavatra mbola azo lazaina momba izany rehetra izany ka nefa efa lava loatra izay ka aleo aloha faranana hatreto ny androany. Misaotra anao sahady nanampaharetana namaky e.
Mba fifampizarana kely moa ny ahy fa tsy sanatria hoe miseho mahay ary mety niteniteny foana koa aza, ka nefa mahafinaritra ahy ny mba mizara ampitiavana izay inoako ka dia nataoko tsy ampisalasalana izany. Mirary fety sambatra ho antsika aby ooo,
Ity fety ity anie mba hampitombo ny fitiavantsika ny Trinité Masina sy ny Fiangonany ary ireo rahalahy mijaly izay anirahany antsika….